လုပ်ငန်းတစ်ခု ရေရှည်ရပ်တည်ပြီး အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်သလဲဆိုရင် Technovate ဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။Technovate ဆိုတာကတော့ Technology + Innovate ဆိုတဲ့အရာ ကနေဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။Technology နည်းပညာကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချတက် ရပါမည်။နည်းပညာရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေကို ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ အသုံးမချနိုင်ရင်တော့ ရေရှည်မှာ စီးပွားရေးတိုးတက်...
Visits : 4984
Strategic Human Resource Management (SHRM) ဆိုတာဘာလဲ
Strategic Human Resource Management (SHRM) ဆိုတာဘာလဲ၊ လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာကြောင့် SHRM ကို လိုအပ်သလဲဆိုတာနဲ့ အတွေ့ရများတဲ့ SHRM Model တွေကိုလည်း ပြောပြပေးပါStrategic HR Management ဆိုတာ HR Strategy နဲ့ Business Strategy နဲ့ Integrate လုပ် ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ Business ရဲ့ Goal ကို ပြည့်မီအောင်သွားတဲ့နည်းလမ်းကို Strategic HR Management လို့ ခေါ်ပါတယ်။ Bus...
Visits : 5332
ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ပြောခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု အပိုင်းကို ဆက်လက်ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ လုပ်ငန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုတာ ရှယ်ယာ ထည့် ဝင်စေတဲ့ ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ Business to Business ပုံစံမျိုး၊ Co-operation ပုံစံမျိုးကို ပြောချင်တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ လုပ်ငန်း ကို န...
Visits : 7850
Visits : 5409
အခြေခံမူများကို လိုက်နာပါဆွန်ဇူးက အောက်ပါအတိုင်း ဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ်။စစ်ပွဲအောင်နိုင်တယ်လို့ ကြိုတင်ပြောနိုင်တဲ့အချက်ငါးချက် ရှိတယ်။၁။ ဘယ်အခါမှာ တိုက်ရမယ်။ ဘယ်အခါမှာ မတိုက်ရဘူးဆိုတာသိရင် စစ်ပွဲနိုင်မယ်။၂။ မိမိထက်သာတဲ့ စစ်အင်အားကိုရော မိမိလောက်မတောင့်တင်းတဲ့ စစ်အင်အားကိုပါ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာ နားလည်ရင် စစ်ပွဲနိုင်မယ်။၃။ တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံး ရည်မှ...
Visits : 5936
61 - 66 of ( 69 ) records